अधिक शुक्ल एकादशी पद्मिनी व्रतकथा, यो व्रत बस्दा कस्तो फल मिल्छ? – Complete Nepali News Portal
अधिक शुक्ल एकादशी पद्मिनी व्रतकथा, यो व्रत बस्दा कस्तो फल मिल्छ?
श्रीकृष्णले भन्नुभएकोछ – मलमास मेरो महिना हो । यस अधिक शुक्ल एकादशी पद्मिनी नामले प्रसिद्ध छ । जसले पद्मिनी एकादशी व्रत गर्दछ, ऊ सारा पापबाट मुक्त भएर पुण्य प्राप्त गर्दछ । पद्मिनी एकादशीको पुण्को वर्णन एक मुख भएका मानव तथा चार मुख भएका ब्रह्माजीले पनि सक्दैनन् ।
यसव्रतको अघिल्लो दिन काशको थालमा भोजन गर्नु, माछा मासु, मसुरो, चना, कोदो, साँग, मह, घर बाहिरको अन्न भोजन नगर्नु तथा मैथुन पनि नगर्नु । अघिल्लो दिन भूईमा सुत्नु र ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु ।